“रातो भाले चमेली, धुरीमा करायो ,गरिबको चमेली, निसाफै हरायो” - “रातो भाले चमेली, धुरीमा करायो ,गरिबको चमेली, निसाफै हरायो”
“रातो भाले चमेली, धुरीमा करायो ,गरिबको चमेली, निसाफै हरायो”
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १२ कार्तिक, 06:36:52 PM
◊ शान्तिमान श्रेष्ठ ◊
पंचायतकालमा जनवादी सांस्कृतिक समुहले रचना गरेको (रातो भाले चमेली, धुरीमा करायो ,गरिबको चमेली, निसाफै हरायो) भन्ने गीत कम्युनिष्ट पार्टीहरुको प्रत्येक कार्यक्रममा गाइन्थ्यो ।
यहि गीतको प्रभावमा क्रान्तिको ज्वालामुखी सिर्जना गर्ने भन्दै कम्युनिस्ट बनेका युवाहरु शायद अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका दिग्गज नेता होलान । त्यो बेलाका गरिबहरु निसाफ खोज्न कम्युनिस्ट भएकाहरु अहिले करोडपति पनि होलान । अझ कोहीले त सुनको ईट्टा छापेका पनि होलान ।
डोरीले बाँधेको चप्पल , फाटेको टोपी र उध्रिएको जाँगे लगाएर यो गीत सुनेर क्रान्तिकारी हुनेहरु अहिले शायद राजधानीको आलिशान महलमा ठाँटका साथ बसेका पनि होलान । जेहोस, गरिबको निसाफ हराएकोले निसाफ दिलाउन थालिएको कम्युनिस्ट आन्दोलनले गरिब तप्काबाट यथोचित समर्थन हासिल गरि यो स्थानमा आइपुगेको छ र हाल दुर्र्इ तिहार्इ बहुमतको सरकार हाँकिरहेको छ ।
तर म द्दिविधामा पर्छु ,कम्युनिस्टहरुको मापदण्डमा निर्मला पन्त , अधिकारी दम्पती , उज्जन श्रेष्ठहरु गरिब हुन कि सामन्त हुन ? तिनले निसाफ पाए कि पाएनन ? निसाफ भन्ने चिज कम्युनिस्ट ट्याग लागेको गरिबको हकमा मात्रै लागू हुने हो कि अन्यको हकमा मात्र हो कि ?
अहिले यो कम्युनिस्ट सरकारले जसरी जनता माथि चर्को कर थोपरेर आफ्नै तलव भत्ता वृद्धि गरेका छन । विदेश भ्रमणमा राज्यकोषको दुरुपयोग गरेका छन । यो चाहिं गरिब जनता माथि कुन कोटीको निसाफ हो ?
कोहि अग्रगामी कम्युनिस्ट मित्र हुनुहुन्छ मेरो जिज्ञासालाई शान्त पारिदिने ?
२०७५, १२ कार्तिक, 06:36:52 PM